29 martsa teto Mahajanga: am-polony sisa ireo Bekotro maroholatra | Région Boeny
Niatomboka tamin’ny filaharana namakivaky ny tanàna izay notarihan’ireo Bekotro maroholatra sy Zokiolona, ary manam-pahefana no nisantarana ny fanamarihana ny faha-70 taonan’ny Tolom-panafahana 29 martsa 1947 teto an-tapon-tanànan’i Mahajanga ny Alarobia teo. Niainga teo amin’ny Lapan’ny tanàna, namakivaky ny araben’I Mahabibo ary nifarana teny amin’ny Jardin Cayla, toerana izay misy ny tsangambaton’ny Mahery fo eto Mahajanga izany.
Nitohy tamin’ny fametrahana fehezam-bonin-kazo teo amin’io kianjan’ny Mahery fo io ny lanonana. Avy eo dia nifandimby ireo manam-pahefana, nanao kabary namoafoa ny ny tantaran’ny Tolom-panafahana 29 martsa 1947 «mba hiampita ny fanilo ny lasa tsy fanadino», araka ny lohahevitra niraisana. Nisy ny fijorona vavolombelona nataon’ireo Bekotro maroholatra, izay am-polony eo sisa raha ho an’ny eto Mahajanga, narahina fanolorana ny Fanilo nataon’izy ireo tamin’ireo solofo.
Taorian’izay dia nosokafan’ny Lehiben’ny faritra, Atoa Saïd Ahamad Jaffar tamin’ny fomba ofisialy ny fampiratiana sy fitsidihana ireo trano heva nirakitra ny zava nisy tamin’izany andron’ny 29 martsa 1947 izany.
Fiaraha-misakafo niarahan’ireo Bekotro maroholatra, Zokiolona ary manam-pahefana tao amin’ny EPP Fiofio Mahajanga, no namaranana ny andron’ny 29 martsa teto Mahajanga.
Tonga nanome voninahitra ity lanonam-pahatsiarovana ity avokoa ireo Solombavambahoaka voafidy teto Mahajanga I sy tao Mahajanga II.